Qaabka Recovery - xogta Recovery formatted si degdeg ah oo ammaan ah
> Resource > Ladnaansho > Recovery Qaabka: Ladnaansho Files ka dib markii formatting dhakhso ah uuga
Marka la soo koobo, formatting waa in initialize iyo diyaariyaan dhexdhexaad kaydinta ah sida drive adag ama flash drive in la aqoonsado, akhri ama qoray computer. Marka aad qaab xijaab / disk, nidaamka tirtiro dhammaan macluumaadka-asasad, baaritaanku si loo hubiyo in dhammaan qaybaha ay yihiin kuwo caadi ah oo la isku hallayn karo (qaybaha xun waxaa la qorayaa), iyo hurinta miiska cinwaanka gudaha wakhti dambe la isticmaalo si loo badbaadiyo macluumaadka. Dhammaan cajaladaha adag waa in la formatted inta aan la isticmaalin.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa kale oo jira xaaladaha qaarkood in aad u baahan tahay si ay u qabtaan qaabka si aad disk heli karaa si ay u isticmaalaan:
• 'Media / Drive aan formatted aad jeceshahay in aad hadda qaab?'
• Operating System lagama helin
• jabeen ama kharribeen ama dhaawac baruurta iyo qoruhu NTFS miiska
• Ma heli karaa file ama barnaamijka
• amarka nvalid
• Hoose / Sare ee HDD failure
• nidaamka Non disk
Sidee inuu ka soo kabsado ka dib markii files formatting
Sida kor ku xusan waxa metioned, qaabka tirtiro oo kaliya miisaska cinwaanka, ma xogta ku kaydsan disk ah. Ayaa miiska cinwaankaaga cusub sheegayaa nidaamka ah in meel bannaan oo la isticmaali karaa xogta cusub. Keliya marka overwritten, xogta run ahaantii laga badiyay. Sidaa darteed, xogta lumay ka dib markii formatting la soo kabsaday karo. Waxa aad u baahan tahay dib u soo kabashada format .
Hel software qaab kabashada - Wondershare Data Recovery halkan:
Haddii aad tahay user Mac ah, fadlan tag Mac qaab kabashada .
Talooyin: Xusuusnow in aan badbaadiyo ama rakibi Wondershare Data Recovery in Risaalo kaas oo aad u badiyay xogta.
Download Free Wondershare kor ku Data Recovery iyo aad u hesho waxa maamula on your computer. Kaliya qasabno dhowr ah, waxaad soo kaban karto, files lumay ay sabab u tahay formatting.
Haddii ay jiraan faylal kala duwan ee ku kaydsan aad disk formatted ama xijaab, waxaad dooran kartaa noocyada file in aad rabto in aad soo kabsado. Markaas barnaamijka uu baaritaanku kaliya kuwa aad rabto oo aad badbaadiyay waqti badan.
Step2. Sheeg goobta saxda ah laga badiyay
Ka dib markii ay doortaan nooca faylka, waxaad cayimi kartaa goobta file inaad halkaas iyaga ka lumay sida dhaqsaha leh ee soo kabasho.
Step3. Bilow inaad iskaan
Halkan awood Deep Scan ah, maxaa yeelay waxa ay kaa caawinaysaa in aad ka heli files formatted. Waxaa Hubi oo u tag "bilow".
Step4. Qabtaan kabashada qaabka
Marka sawirka dhameystiray, file waxaa ku qoran noocyada. Waxaad ku eegaan karo iyo hubi in ay soo eegista.
Fiiro Gaar ah: Tani Data Recovery kuu ogolaanaya in aad ka bogsato files formatted ka kaydinta kala duwan ee warbaahinta sida telefoonka gacanta, ciyaaryahanka music, kaadhka xusuusta, drive adag, camera digital, fiidiyo, iPod, iwm, iyo taageerada dib u soo kabashada ee videos, photos, music, waraaqaha , emails iyo aad u badan, laakiin waxaa laga heli karaa oo kaliya in ay sawiro Falanqeynta, waraaqaha Xafiiska, PDF, ZIP, ARA iyo HTML / HTM ka hor inta aadan soo kabsado iyaga.
Video tutorial soo kabashada file formatted